A: Ixabiso lokutya liyanda ngeyona ndlela ikhawulezayo kwisithuba seminyaka elishumi
Amaxabiso okutya kwihlabathi jikelele atsibele kwizinga lawo elikhawulezayo lenyanga ngaphezulu kweminyaka elishumi, ngokweZizwe eziManyeneyo.
L I-UN isebenzisa isalathiso esibanzi iindleko zokutya zehlabathi, ezikonyuke kangangeenyanga ezili-12 zilandelelana.
Abathengisi babethwe kukuphazamiseka kwimveliso, ezabasebenzi kunye nezothutho ngexesha lendyikityha yokufa.
Iingxaki ziyakhula malunga nokunyuka kwamaxabiso ngokubanzi kunye nefuthe lokunyuka kwamatyala okutya ekubuyiseni uqoqosho lwehlabathi.
Umbutho woKutya noLimo weZizwe eziManyeneyo (FAO) amaxabiso okutya alanda amaxabiso ezinto zokutya ezahlukeneyo kubandakanya iinkozo, iimbewu zeoyile, ubisi, inyama kunye neswekile.
Ngokutsho kwesalathiso ,
amaxabiso okutya ngoMeyi ayephezulu nge-4.8% kunaphakathiUTshazimpuzi-olona nyuso lukhulu lwenyanga ukusuka ngo-Okthobha ka-2010- kunye ne-39.7% ngaphezulu kunangexesha elifanayo kunyaka ophelileyo (ngoMeyi 2020).
Izinto ezintlanu ze-ind ex rose, ziqhutywa kukunyuka kwamaxabiso eoyile yemifuno, iinkozo kunye neswekile.
Oku kutyhale isalathiso ukuya kwelona nqanaba liphezulu ukusukela ngoSeptemba ka-2011.
ii-invoyisi zokuthenga kulindeleke ukuba zikonyuse oku, ngokwe-BRC
Ukunyuka kwamaxabiso kungadlula kwi-2% njengoko amaxabiso enyuka
ukunyusa indleko sisiphumo sokufunwa ngokutsha kwamanye amazwe kunye nokusilela kwemveliso ephantsi.
Ukuthengisa kunye nokuphazamiseka konikezelo ngenxa yezithintelo zentshukumo kubangele ukunqongophala kwendawo kunye namaxabiso aphezulu.
Iingcali bezilumkisile ukuba imfuno ephezulu kunye neziphumo eziphantsi ziya kukhokelela ekunyukeni kwamaxabiso aphezulu njengoko uqoqosho luvela ekutshixeni.
Nangona kunjalo, amanye amashishiniNdiza kufumana ukuchacha okunamandla. Uqikelelo lwe-FAO lurekhoda ukuveliswa kokutya okuziinkozo kulo nyaka, okunokunceda ukunciphisa uxinzelelo olonyukayo kumaxabiso. Vuka.
Ukongeza ekunikezeleni isn emva kwexabiso lentengo kunye neenkonzo, ichaphazela inzala kwaye ke ngoko izinto zethu ezibambekayo kwaye zisetyenziselwa ukuchaza izinto ezilawulwayo, ezinje ngamatikiti kaloliwe.
Esi sesinye sezitshixo amanyathelo ezentlalo-ntle, njengoko ichaphazela abanokuthenga abathengi ngemali yabo. Ukuba kukho ukunyuka kwamaxabiso, imali ayihambi kangako. Ukunyuka kwamaxabiso kancinci, nangona kunjalo, ihlala ikhuthazaabantu ukuba bathenge iimveliso ngaphambili kwaye ivumela iinkampani ukuba zonyuse imivuzo ngokulula. Kwaye zombini ezi zinto ziqhubela phambili ukukhula koqoqosho.